धार्मिक भावनाले ओतप्रोत भएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई हाम्रा मठ–मन्दिर कसरी पुनर्निर्माण भएका छन्, सरकारी सहायताबिना नै सहयोगी दाताहरूको खुला हातले कसरी ठूलो काम सम्पन्न भइरहेको छ भन्ने बुझाउन र देखाउन पनि यहाँ भ्रमण गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। यो सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवान्वित तुल्याउने अवसर पनि हो। मेरो एउटै चिन्ता छ, स्तुप घुम्न जाने पर्यटकले शौचालय पो कहाँ प्रयोग गर्लान्? स्तुप परिसरमा चर्पी नभएपछि कसरी लामो समय बसेर आनन्द लिने होला? यस्तो अवस्थामा दिसा–पिसाब लागे कुनै राम्रो होटलमा गएर सय रुपैयाँको चिया पिएर त्यहाँको चर्पी प्रयोग गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। तर, यस्ता धार्मिक स्थल आउने सबै मानिससँग त्यसरी होटलमा गएर महँगो चिया खाने पैसा नहुन पनि सक्छ। अनि के उनीहरूले यति राम्रो स्तुपको आनन्द लिँदै लामो समय बिताउन नपाउने? पुरुषहरूले त कुनै कुनामा उभिएर पनि आफूलाई सहज बनाउँछन् होला, तर महिलाले के गर्ने? महिलालाई यसरी जथाभावी कतै गएर ‘सहज’ हुन पनि गाह्रो पर्छ। पुनर्निर्माणको यति ठूलो काम गर्दा पैसाकै अभावमा त पक्कै चर्पी नबनाइएको होइन होला। पानी व्यवस्थापनका लागि पनि पैसा अभाव थिएन होला। यहाँ एउटै कुराको अभाव थियो, आउनेजाने मानिसलाई चर्पी र पानीको राम्रो बन्दोबस्त हुनुपर्छ भन्ने विचारको। घुम्न आएका व्यक्तिले कुनै दिन बेलुकासम्म घुमेर अँध्यारो भएपछि कुना–कुनामा दिसा–पिसाब गरे भने भोलिपल्टदेखि त्यो धार्मिक स्थलको अवस्था के होला?
नेपालका अन्य ठूला धार्मिक स्थल जानकीधाम, बुढानिलकण्ठ वा गोसाइँकुण्डमा पनि चर्पीको अभावले जताततै फोहोर छ। चर्पी र पानीको व्यवस्था नभएर यात्रीलाई कति समस्या छ भन्ने कसले विचार गर्ला? जानकी मन्दिरमा केही समयअघि विवाह पञ्चमीको धुमधाम भयो। लाखौं मानिसले उक्त उत्सव मनाए। तर, ती मानिसले उत्सव मनाएर दिसा–पिसाब कहाँ गरे होलान्? जनकपुरमा सार्वजनिक शौचालय कति छ भनेर मैले घुमेर हेर्दा कतै देखिन। कतिले यो लेख पढेर जाबो चर्पीको विषयमा के लेखे होलान् भन्ठान्नु होला। तर, चर्पी नभएको ठाउँमा दुई दिन बसेर अनुभव गरे थाहा हुन्छ, चर्पी कति महत्वपूर्ण छ भनेर। नेपालका कति गाउँमा चर्पी नभएकैले झाडापखाला फैलिएको हामीले देखेका छौं। चर्पी नभएकाले वनजंगल जाँदा जनावरको टोकाइको शिकार भएका उदाहरण पनि हामीसँग छन्। अध्याँरो झाडीभित्र पिसाब गर्न जाँदा बलात्कारको शिकार भएका घटना पनि थुप्रै छन्। खासगरी तराईमा चर्पीको अभावले महिला स्वास्थ्यमा समस्या परेका छन्। हाम्रा मठ–मन्दिरमा चर्पीको अभाव त्यही सिलसिलाको एउटा कडी हो।
आइतबार, पौष १०, २०७३ १६:१९:२२